Iyo Nhamba 1 Kukosha kweCMOs muna 2012 | Martech Zone
Iyo Nhamba 1 Kukosha kweCMOs muna 2012
Chipiri, February 28, 2012 Chipiri, February 28, 2012 Douglas Karr
Kana iwe uine mukana wekutora iyo IBM Global Chief Kushambadzira Officer Yekudzidza ye2012, zvakakodzera kuti uverenge! Uye iwe unogona kutora iyo CMO kuongorora naizvo!
Kubva kuIBM Global CMO Study yegore ra2012
Mushure mekutarisana-ne-kumeso kubvunzana ne1,734 maCMOs, anotora 19 maindasitiri nenyika makumi matanhatu nenomwe, tinoziva maCMOs ari kunzwa akatambanudzwa, asi isu takanzwawo mufaro mukuru nezveramangwana rekushambadzira. Idzi nhaurirano uye kwedu kwakadzama kuongororwa kweongororo dzekutsvaga kunosimbisa kukosha kwekupindura kune zvitatu zvitsva.
The simba mutengi ikozvino yave mukutonga kwehukama hwebhizinesi
Kununura mutengi kukosha chakakosha - uye hunhu hwesangano hwakakosha sezvakagadzirwa uye masevhisi aanopa
Iko kumanikidza ku kuzvidavirira kune bhizinesi hachisi chiratidzo chete cheyakaoma nguva, asi chinja zvachose chinoda nzira nyowani, maturusi uye hunyanzvi.
Nekuuya kwe mobile uye zvemagariro, iwe unofunga kuti ivo vachatora iyo yekutanga nzvimbo yekuve yakakosha kune maCMOs pasirese… asi unenge wakanganisa
Vhiki rapfuura ndaibvunzurudza Troy Burk, muvambi we Kushambadzira automation kambani, uye ini ndikamubvunza nezve chinzvimbo chavo muindastiri. Mhinduro yake yaive yakanangana zvinoenderana neiyo CMO kudzidza:
Hukama hunouya pamberi pemari muduramazwi uye mubhizinesi. Dhiraivha hukama uye iwe uchawana mari yacho. KweVatengi Lifecycle Kushambadzira inzira yakasiyana yekutarisa bhizinesi rako - pamatanho ese ehunyanzvi hwevatengi. Kushambadzira kunoita basa rakakosha rekuona zvirongwa zvakanaka nemishandirapamwe (kutengesa, kushambadza, uye kubudirira kwevatengi) vese vari kushanda pamwe chete kufambisa kusangana neakanakisisa tarisiro / vatengi kuvasundira kumberi muhukama, zvisinei nedanho rekutarisa.
Mutengi Lifecycle Kushambadzira Automation neRight On Interactive ndiyo chete mhinduro inopa kuoneka kwesangano kune vese vatengi vavo uye tarisiro vari muhukama (kana rwendo rwevatengi). Kubva pakufungirwa kuenda kumutengi akavimbika. Iwe unovaona vese uye unoshandisa otomatiki kutyaira kumwe kubatanidzwa.
Zvakanaka kushanda nemubatsiri uye mutengi ari pamusoro pezviitiko!
Tags: mutengi lifecycle kushambadzirakuvimbika kwemutengikurudyi pane kudyidzanaRoyi
Rimwe Gore - 700% Kukura Kwenhare
Wedzera LinkedIn Kambani Tevedzera Bhatani
Kukadzi 28, 2012 na12: 34 PM
Ini ndakaenda kuIBM CMO Yekudzidza Webinar iyo yandinobvuma yaive kushandisa kukuru kwenguva, bhurogu yako iri pachena uye ndinofarira mabatanidzirwo awakaita kubvunzurudza kwako kwazvino.